Itoobiyada Oo Si Kadis ah u Aqoonsatay Somaliland! | Xaqiiqonews
Itoobiyada Oo Si Kadis ah u Aqoonsatay Somaliland!
Website-ka wasaaradda arrimaha dibedda Itoobiya ayaa lasoo dhigay map ama khariidad la-yaba leh oo si cad ugu xadgudubtay madaxbannaanida iyo qarannimada Soomaaliya.
Waxaa sidoo kale yaab leh, in Somaliland laga reebay dhulka Soomaaliyeed ee Itoobiya ay ku darsatay sida ka muuqata khariidadda, islamarkaana Somaliland laga dhigay dal madax banaan oo ka tirsan Afrika.
Lama yaqaan sababta Itoobiya ay sidan u sameysay iyo ujeedada laga leeyahay, balse waxaa cad in hamigii Itoobiya ee in mar un ay baabi’iso kuna darsato Soomaaliya uu banaanka yimid, ha noqoto ku talo-gal mise sir fakatay.
Arrintan ayaa imanaysa ayada oo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu si aad ah isugu dhiibay dowladda Itoobiya Abiy Ahmed, isaga oo rumeysan in isbahaysi uu la sameysto ay muhiim u tahay dowladnimada Soomaaliya.
Khariidada Afrika-da Cusub ee Itoobiya dhawaan soo saartay